गर्भाधानमा हुने त्रुटीले हुनेवाला बच्चामा खराबी देखिन सक्छ ? - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Homeसमाचारगर्भाधानमा हुने त्रुटीले हुनेवाला बच्चामा खराबी देखिन सक्छ ?
सन्तानका रहर गरेका दम्पतीहरुका लागि त्यो क्षण निकै सुखद हुन्छ कि, जब उनीहरुको गर्भ रहन्छ । गर्भ रहेको कुरा श्रीमतीले श्रीमानलाई सुनाउँछिन् । यो शुभ समाचारले उनीहरु मात्र होइन पुरा परिवारलाई नै उल्लासमय बनाइदिन्छ ।
जति जति गर्भको बच्चा हुर्कदै जान्छ, दम्पतीमा कौतुहलता पनि बढ्दै जान्छ । छोरा होला कि छोरी ? कस्ता बच्चा जन्मिएलान् ? साथसाथै एउटा प्रश्नले भने उनीहरुलाई बेचैन पनि बनाउँछ । जस्तो कि, गर्भको बच्चा सकुशल वा स्वस्थ रुपमै जन्मिएलान् ? जन्मजात शारीरिक दोष लिएर त जन्मदैनन् ?
यसै सेरोफेरोमा अनलाइनखबरले प्रसूती तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. बालकृष्ण शाहसँग कुराकानी गरेको छ ।
गर्भावस्था आफैंमा एउटा जटिल अनि बिशेष अवस्था हो । यस अवस्थामा आमा बन्ने खुशी मात्र जोडिएका हुदैनन्, गर्भसंग समाजिक, पारिवारीक र आत्मीय सम्बन्ध रहेको हुन्छ । गर्भावस्थामा हुने शारिरिक र हर्मोनल परिवर्तनहरुले गर्भवतीहरुमा समस्या र चिन्ताहरु थपिने हुन्छन् । त्यसैले यी परिवर्तनहरुका बारेमा गर्भवती तथा दम्पती र परिवारका सदस्यहरुले राम्ररी बुझे तनाव आफैं कम हुने हुन्छ । त्यसैले हरेक दम्पतीले गर्भका योजना बनाउनु र गर्भ राख्नु पहिले नै चिकित्सकिय परामर्श लिनु राम्रो हुन्छ ।
गर्भ राख्नु करिव ९० दिन अर्थात ३ महिना अगाडि नै गर्भका योजनाका लागि प्रसुति तथा स्त्रीरोग बिशेषज्ञसंग गर्भाधान पूर्व परामर्श गर्नु राम्रो हुन्छ । यस परामर्शमा गर्भवती हुने योजनामा रहेका महिलाको शारिरक परिक्षण तथा आवश्यक अन्य परिक्षण गरेर पोषण एवं शारिरिक सक्षमता, संक्रमणहरु (बिशेषतः यौनसंक्रमण), दिर्धरोगहरु (उच्च रक्तचाप, मधुमेह), हर्मोनहरुको सन्तुलन (थाईराईड) आदि अवस्था पत्ता लगाउनुका साथै केहि कमजोर वा गडबडि भए उपचार समेत गरिने भएकाले गर्भ र गर्भको विकासका लागि महत्वपुर्ण साबित हुन्छ ।
यस परामर्शमा गर्भको योजनामा रहेको महिला तथा उनको परिवारसंग अन्य स्वास्थ्य र गर्भका जटिलता सम्बन्धि, जोखिम न्युनिकरण र गर्भका विकासका लागि अपनाउनु पर्ने सर्तकता अनि व्यवहारमा परिवर्तन समेत सम्बन्धि जानकारी दिईन्छ जसले गर्भका कारणले हुने तनाव पनि कम हुन्छ ।
गर्भाधानका क्रममा यस्ता कुनै त्रुटी हुनसक्छ, जसले हुनेवाला बच्चामा समस्या निम्त्याउने जोखिम हुन्छ ?
त्रुटि हुन सक्छ तर हुन्छ नै भन्ने छैन । गर्भको चाहना राखेको दम्पितिमा कुन त्रुटि पाईए, त्यस्को उपचार समयमा नै गर्नु पर्छ । यसता त्रुटिहरु सबै एकै किसिमका हुन्छन् भन्ने छैन, त्यसैले यसका असर तथा हुनेवाला बच्चामा पनि समस्या फरक–फरक हुन सक्छन् र कति त्रुटिले गर्भ नै खेर समेत जान सक्छ ।
कुनै पनि काम योजना बनाएर गरे सफलता मिल्ने सम्भावना बढि हुन्छ र योजना बिना सफल भईदैन भन्ने छैन, तर कठिनाई र असफलताको जोखिम बढ्ने पक्का हुन्छ । गर्भमा पनि त्यहि सिद्धान्त लागु हुन्छ भन्दा फरक नपर्ला । गर्भको योजना नबनाउदै वा कुनै तयारी बिना नै परिवार नियोजोनका साधन प्रयोग नगरेको अवस्थामा गर्भ रहन सक्छ । अधिंकाश दम्पतीहरुको यस्तै हुने गरेको हुन्छ । यस अवस्थामा गर्भ रहेको शंका लाग्नासाथ स्वास्थ्यकर्मीसँग जाँच गराउनु पर्छ ।
यस अवस्थामा धुम्रपान, मद्यपान नगर्ने तथा धुम्रपान गर्नेहरुसंग पनि नबस्ने । नियमित फलफुल सेवन गर्नुका साथै सन्तुलित भोजन गर्ने । नियमित हल्का व्ययाम गर्ने तथा तनावमा नबस्ने । दैनिक फोलिक एसिड तथा चिकित्सकले सुझाएको औषधिहरु सेवन गर्ने । चिकित्सकले दिएका सम्पुर्ण निर्देशनहरु पालना गर्ने र द्वविधा लागेको कुरामा पटक पटक परामर्श तथा सल्लाह गर्ने ।
आमाको मनस्थिति, खानपान र रहनसहनको असर गर्भको बच्चामा हुन्छ । त्यसैले गर्भवतीहरु तनाव रहित, स्वस्थ्य वातावरणमा राम्रो पोषणयुक्त खानेकुरा सेवन गर्नु राम्रो हो । कुपोषण र प्रदुषित वतावरणले गर्भको शारिरिक र मानसिक विकासमा नाकारात्मक प्रभाव पार्ने हुन्छ ।
सबै गर्भवतीहरुमा असक्त बच्चा जन्माउन सक्ने जोखिम हुन्छ । नजिकको नातेदारसँग विवाह गरेर गर्भवती भएमा, वंशानुगत वा अन्य आनुवंशिक विकारहरु भएमा, गर्भावस्थामा जथाभावी औषधीको सेवन गरेमा, गर्भावस्थामा कुपोषण भएमा, कुनै संक्रमण भएमा, गर्भावस्थामा लागूऔषधी, धुम्रपान तथा रक्सी सेवन गरेमा, आमाको उमेर ३५ वर्ष वा सो भन्दा बढी भएमा, प्रदुषणको प्रभाव परेमा जोखिम बढ्ने हुन्छ ।
लापरवाही त के भन्नु ? सहि जानकारी नपाएको कारणले जसले जे भन्यो त्यसैको कुरामा लागेर दुःख पाईरहेको देख्छु । दक्ष स्वास्थ्यकर्मी तथा विज्ञ चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ, हल्लाका पछि नलाग्नु राम्रो हुन्छ ।
दोस्रो बच्चाको योजना बनाउदा नि पहिलेको जस्तै प्रि–कन्सेप्सनल काउन्सिलिङ्गबाट शुरु गर्नु पर्छ । जन्मान्तरका कति गर्ने दम्पतिले सल्लाह गर्नुपर्छ । समान्यतया ‘दोस्रो बच्चा कहिले, पहिलो स्कुल जान्छ जहिले’ सम्झदा राम्रो नै हुन्छ ।
स्वास्थ्यको हिसावले २० बर्ष पार गरिसके पछि ३५ सम्म राम्रो समय मानिन्छ ।
Previous articleदशैंका दश कुरा
Next articleसिरहामा झिझिया हेर्न गएका युवकको शव इनारमा